Displaying 61-70 of 740 results.
एमालेको उक्साहटमा सरकारले सप्तरीमा गोली चलाउन लगायो : उपेन्द्र यादब
काठमाडौं, २९ फाल्गुन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरीको मलेठमा आफूहरुको एमालेसँग मुठभेड नभएको बताएका छन् ।
आइतबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमालेको उक्साहटमा सरकारले गोली चलाएर पाँच जनाको नरसंहार गरेको दाबी गर
एनसेल प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रपन्च : डा. भट्टराई
काठमाडौं, २९ फाल्गुन । सरकारले एनसेल विक्रि प्रक्रियामा राजस्व नउठाउने प्रपन्च गरेको भन्दै नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आपक्ति जनाएका छन् ।
आइतबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले भनेका छन्–‘सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापद
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी
कञ्चनपुर, २८ फाल्गुन । विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले बाध्य भएर पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले स्थानीय गोविन्द गौतमको हत्या गरेको विरोधमा आज पनि प्
कमल थापाको सरकारमा ‘इन्ट्रि’ राजनीतिको गाँठो फुक्ने संकेत (समाचार टिप्पणी)
- सुदिप विमली
काठमाडौं, २८ फाल्गुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले विहिबार उपप्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्रीको सपथ खाए । उनी सहित राप्रपाका दिलनाथ गिरी मन्त्री र पर्शुराम तामाङ राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भइका छन् । गिरी पर्यटनम.. .. ..
विहानै काठमाडौंमा दुई भारतीय गाडी तोडफोड, दुई पक्राउ
काठमाडौं, २८ फाल्गुन । काठमाडौंस्थित ठाउँ–ठाउँमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी तोडफोड भएको छ । शनिवार विहान गोगंबुु र कलंकीमा भारतीय गाडी तोडफोड गरिएको हो ।
कलंकीमा एचपी ६४५०६६ र गांगवुमा यूपी ६५०६५ नम्बरको गाडी तोडफोड गरिएको प्रहरीले जनाए । तोडफ
खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो, शनिवारदेखि लागू हुने
काठमाडौं, २७ फाल्गुन । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी खना पकाउने ग्यासको ग्यासको मूल्य बढाएको छ । भारतबाट ग्यासको मूल्य उच्च रुपमा बढेर आएको भन्दै निगमले ग्यास प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको हो ।
अब एक स
जवरजस्ती निर्वाचन गराए बिथोल्ने राजेन्द्र महतोको चेतावनी
विराटनगर, २७ फाल्गुन । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जवरजस्ती निर्वाचन गराए बिथोल्ने गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिराटनगर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष महतोले यस्तो चेतावनी दिए ।
उनले भने, मधेसी
सप्तरीमा प्रहरीबाट मारिनेको संख्या पाँच पुग्यो
सप्तरी, २७ फाल्गुन । सप्तरीको मलेठमा प्रहरीबाट मारिनेको संख्या ५ पुगेको छ । आज केहिबेर अगाडी प्रहरीको गोली लागेर घाईते सप्तरीको जमुनी १ का ५७ बर्षिय ईनर यादबको मृत्यू भएको हो ।
यादबको आज दिउँसो २ बजेर ३० मिनेटमा धनरानस्थित अस्पतालमा उपचारका क्रमम
कञ्चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती जारी, गोली र आश्रुग्यास बर्साउँदै
कञ्चनपुर, २७ फाल्गुन । कञ्चनपुरमा हिजो भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली हानेर एक नेपालीको हत्या गरेपछि एसएसबीले आज पनि ज्यादती गरिरहेको छ । एसएसबीले नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेर अहिलेसम्म ९ राउण्ड हवाई फायर र ४ राउण्ड अश्रुग्यास हानेको छ ।
मोर्चाका सांसदद्धारा संसदमा नाराबाजी, सप्तरी गोलीकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग
काठमाडौं, २७ फाल्गुन । सप्तरीमा भएको गोलीकान्डमा चार जनाको मृत्यु भएको विरोधमा मधेसी मोर्चाका सांसदले आजको संसद बैठक बहिस्कार गरेका छन् । बैठक सुरु हुने बित्तिकै मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले नाराबाजी गरेका हुन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांस